INingizimu Afrika isingene kwinzikamnotho | News24
INingizimu Afrika isingene kwinzikamnotho
Pretoria – Izinga lomthamo wemikhiqizo kanye nemisebenzi (Gross Domestic Product) eyenziwe kuleli ekoteni yokuqala onyakeni ka-2017 kwehle ngo-0.7%, nokusho ukuthi leli zwe selingene shi kwinzikamnotho (recession), ngokoMqondisi Jikelele we-Economic Statistics kwaStatistics South Africa (Stats SA), uJoe de Beer.
Lo mbiko wakamuva weGDP ukhishwe yiStats SA ngoLwesibili.
Lokhu kwehla kwezinga lemikhiqizo yakuleli kulandela okunye ukwehla ngo-0.3% ekoteni yesine kunyaka ka-2016.
Uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, ukunyuka kwemikhiqizo yakuleli kwafinyelela ku-1%. “Eminyakeni emine edlule bekunezikhawu zokungakhuli kahle komnotho ngaphambi kwamakota amabili okugcina,” kusho uDe Beer.
Imikhakha yezohwebo kanye nezimboni iyona ebe nomthelela omkhulu kulokhu. Uhwebo lwehle ngo-5.9% kwathi ukwakhiwa kwemikhiqizo ezimbonini kona kwehla ngo-3.7%.
OLUNYE UDABA: Usuphinde wehliselwa ezingeni eliphansi lomnotho uMzansi
Imboni yezolimo kanye nezimayini yizona kuphela izimboni ezibe nomthelela omuhle. Imboni yezolimo inyuke ngo-22.2% ngemuva kokululama kwayo kulandela ukuhlaselwa yisomiso, kwathi imboni yezimayini yona yakhula ngo-12.8%.
Kodwa-ke ukusetshenziswa kwemali emikhiqizweni kwehle ngo-0.8% ekoteni yokuqala.
Kwehlile ukusetshenziswa kwemali emakhaya ehlukene, nalapho ukusetshenziswa kwemali ekudleni, iziphuzo ezinganabo utshwala, izimpahla zokugqoka kanye nezicathulo kanjalo nezokuthutha kube nomthelela omubi.
Ukunyuka ngo-3.2% kwezimpahla ezivela kwamanye amazwe kulawulwe kakhulu yimikhiqizo yezimbiwa phansi.
Ukusetshenziswa kwemali nguhulumeni kwehle ngo-1%.
Esikhathini esingengakanani esedlule iWorld Bank isanda kuqagula ukuthi umnotho uzokhula ngezinga eliphansi eminyakeni emibili ezayo. Leli Bhange loMhlaba lilindele ukuthi umnotho uzokhula ngo-0.6% ngo-2017, ngo-1.1% ngo-2018 bese kuba u-2% ngo-2019.
Ngonyaka ka-2017 nangonyaka ka-2018 kuqagulwe ukuthi umnotho uzokhula ngaphansi ngo-0.5% no-0.7% ngokulandelana okunezibalo zangoJanuwari ku-2017, iFin24 ibike kanjalo.